The Ab Presents Nepal » भारतले नेपालको कत्ति सीमाना मिचेको छ ? सबैंको जानकारीका लागि सबैले सेयर गरौं !
(सीमानाको काम भारतले सेनालाई दिएको छ । तर नेपालले घरजग्गा नाप्ने नापी विभागलाई दिएको छ । जुन असुहाउँदो छ, नेपालको तर्फबाट पनि सीमाको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्छ । पूर्वनेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ)नेपाल र भारतकाबीच १८८० लाईन किलोमिटर खुला सिमाना रहेको छ । यसमध्ये ६४७ किलोमिटर नदी सीमा पर्दछ । यस्तो सीमा रेखै–रेखामा मेची, महाकाली, नारायणी, राप्ती, मोहना, पथरैया, उरिया, पन्जनद, घोङ्गि, लुना अर्णानालाजस्ता साना ठूला गरी करीब ६० ओटा नदीनाला पर्दछन् । नेपालको दक्षिण, दक्षिण–पूर्व तथा दक्षिण–पश्चिम सीमारेखामा अक्सर समतल भूभाग , आवादि जमिन तथा गाउँवस्तीहरु पर्दछन् भने पूर्व, पश्चिमका बाँकी सीमारेखामा पहाडी वुत्तखण्ड पर्दछ ।जनबोलीबाट
नेपाल र भारत अन्तराष्ट्रिय हिसाबले भारतभन्दा २२ गुणा सानो नेपाल र ४५ जना भारतीयको अनुपातमा १ जना नेपाली रहेको नेपालको सीमानाको ठाउँ ठाउँमा भारतबाट बेला बखतमा कच्याक् कच्याक् थिचो मिचो, कच्पच्, झै झमेला मनोमालिन्य, वादविवाद, अतिक्रमण भएको सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । तर दुबै देशकाबीच भयंकर घम्सा–घम्सी, का’टा–का’ट, मा’रामार गो’लीले छेडाछेड भएको चाहिँ देखिदैन ‘।
यस्तै दवै देशमा परापूर्वकालदेखि नै महाभारत पर्वत श्रृंखला र सिवालिक ९चुरे० पहाडको खण्ड घुसेको छ भने गंगाको मैदानी भाग पनि दुवै देशमा पर्दछ, तर धेरै र थोरै हिस्साको मात्र फरक छ । हँदा हुँदा मानिसहरुको वर्ण पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिको छ, अलिकति कालोपनको कुनै कतै हिस्सा परेको छ र पनि टड्कारो रुपले टाढैबाट चिन्न सकिने अंग्रेज र यहुदीजस्तो फरक होइन । तर नेपाली र अधिकांश भारतीय मित्रहरुको दिलको मात्रामा निकै फरक परेको होइन । तर नेपाल र अधिकांश भारतीय मित्रहरुको दिलको मात्रामा निकै परक परेको तेस्रो देशको मानिसलेपनि पहिचान गरेका छन् ‘।
नपत्याए, तपाईँ र तपाईँको भारतीय मित्र एकैसाथ विश्वको विकसित मुलुकमा पुग्नुभयो भने त्यहाँको अर्को तेस्रो मित्रले गरेको व्यवाहारको अनुपातबाट तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । नेपाली र भारतीय मित्रहरु सिन्काको साँध राखेर सँगै सुत्दा निद्रामा अथवा अर्ध निद्रामा खुट्टाले एक अर्कालाई लाग्न सक्छ, यो स्वाभिकै हो । तर निद्राबाट पूरा व्युझिँसकेपछि पनि भारतीय मित्रको खुट्टाले नेपाली मित्रको खुट्टालाई थिचेको थिच्यै पारेर राख्नु त भएन नि । त्यसमाथि पनि नेपालीको खुट्टालाई ओछ्यानमा खाल्डोपारी पुरेको पु¥यै गर्नु त झन मिलेन नि ‘।